Iindaba-Masibambe umdlalo wokuthotywa kweendiza
Iplastiki idweliswe njengenye yezona zixhobo zinkulu zenkulungwane yama-20. Iplastiki ifana nekrele elintlangothi-mbini. Ngelixa izisa ukulula kuthi, ikwazisa umthwalo onzima kwindalo esingqongileyo.
Ukuthintela ungcoliseko lwabamhlophe, amazwe ahlukeneyo akhuphe ngokulandelelana imigaqo. Ekuqaleni kuka-2020, i-China yakhupha "uluvo malunga nokuQiniseka ngakumbi kuNyango loNgcoliseko lwePlastiki". Ukuphela kwe-2020, ishishini lokutya e-China liphela liza kuthintela ukusetyenziswa kweendiza zeplastiki ezingasokuze zonakaliswe.
Okwangoku, zintathu iindidi eziphambili zeendiza esidibene nazo kwimarike: Izitro PP, I-PLA straws, kunye iindiza zamaphepha.
Ukusuka ekhohlo: iphepha lomququ, i-PLA straw, i-PP straw
Ukujonga ukuthotywa kokusebenza kweendiza ezahlukeneyo, siququzelele ukhuphiswano lokuthotywa kweendiza.
Sityale iindiza zezinto ezintathu ezahlukeneyo emhlabeni ukulinganisa ukuthotywa komgquba wezinto ezahlukeneyo phantsi kweemeko zendalo kwaye sibone okwenzekileyo kubo emva kweentsuku ezingama-70:
Emva kweentsuku ezingama-70 zokuthotywa komgquba, izitovu ze-PP zazingaguqukanga.
Emva kweentsuku ezingama-70 zokuthotywa komgquba, ingca yePLA ayitshintshanga kakhulu.
Emva kweentsuku ezingama-70 zokuthotywa komgquba, isiphelo sendiza yephepha sele sibolile kwaye sithotyiwe.
Iziphumo zomdlalo:Amaphepha ephepha aphumelele kolu khuphiswano lokonakaliswa.
Senza uthelekiso olulula lokwenziwa kwendalo yokusingqongileyo kweendiza ezintathu:
Ukuhlaziywa okanye hayi
EWE kodwa kunzima kakhulu
EWE kwaye kulula
Ixesha Post: Aug-09-2021